ianao niarahaba Smeshariki Doctor Plush, Dora sy Diego, Tom sy Jerry, Fixico, zanak'ondry Sean sy ny hafa, satria izany no loha, izay maimaim-poana, dia hilalao an-tserasera lalao ho an'ny ankizy. Funny, mampihomehy efa nanomana endri-tsoratra be dia be ny asa vaovao izay manam-potoana hianarana. Manao kilalaon-tsaina, hanangona zavatra, tadiavo ny an-dalana an-trano, ary mandao ny trano. Ianao no miandry ny fangatahana sy ny fikarohana, mandoko boky, Puzzles sy ny tenifototra. Afaka baolina isa amin'ny alalan'ny filalaovana ny baolina sy ny tsianjery mozika feo. Fa ho mandihy milina Fijit Ry namako, sambatra gidro, tsy maintsy hampifaly ny tenany amin'ny alalan'ny fanaovana asa maro.
Lalao Games ho an'ny ankizy tamin'ny Category:
Farany Games ho an'ny ankizy
Kamio manala ny fako
Zoma Alina Funkin Tricky vs Black Imposter
Lalao Online Games ho an'ny ankizy
Kids Games Online ho an'ny kely, udalenky
solosaina, takela-bato, marani-tsaina finday ho nitsahatra va ny kilalao fotsiny ho an'ny olon-dehibe. Ny ankizy nahay azy tamin'ny mahagaga hafainganam-pandeha, ary nisy zavatra tokony hatao tao amin'ny virtoaly toerana natao ho an'ny ankizy lalao.
izany foana ny loko, feno fihantsiana, fahafinaretana mozika, manome fahafinaretana ary miaraka amin'izay koa, soa. Mijanona ao amin'ny sokajy ity, dia ho afaka handray anjara amin'ny firazanana, hanao trano, hanorina toeram-pambolena, sy ny zazalahy kely izany filalaovana dia hianatra ny fototry ny kajy sy ny taratasy, loko sy ny endriny mba ho isaky ny valiny marina mba hihaino fiderana.
Tsy maintsy hilalao fa
Lalao ho an'ny ankizy amin'ny aterineto no mizara ho kofehy, mba ho mora kokoa ny mahita fahafinaretana, mifanaraka amin'ny toe-po amin'izao fotoana izao.
Colouring ny taratasy Albums sahy niditra tao amin'ny tontolon'ny teknolojia maoderina.
Ary ankehitriny dia azo atao ny hanoratanao biby kely, fiara, milina, matoatoa, saribakoly sy ny sariitatra litera ody borosy, mandroboka azy ao an-manan-karena faritra, ny loko. Fa izao no tsy ampy, dia hahazo ianareo asa fanampiny. Mariho, ohatra, ny sary, ary avy eo dia mamerina izany tao ny loko. Esory amin loko gaoma na mora ampiharina fotsiny eo an-tampony ny hafa, ary dia ho soloina avy hatrany. Dia afaka ny ho bebe kokoa Background handravaka amin'ny sparkles, sy ny endriky ny mpanonta pirinty.
Mba hampitomboana ny vokatry ny manokana dehibe.
ny ray aman-dreny dia tena tia ny ankizy, dia ny mpanampy lehibe ao amin'ny fianarana feno. Eto dia afaka mianatra feo, mozika, kitendry fisehon'ny, anarana ny zavatra sy ny biby. Amin'ny alalan'ny fanangonana Puzzles, na ny tenifototra, ny ankizy mianatra mba hamantarana endriny sy manao sary singa iray.
Lalao ho an'ny ankizy telo misesy maka toerana mpitarika ao amin'ny sokajy. Mamirapiratra miloko sekely nilahatra, dia hitondra anao lalao hevitra.
Ny fikatsahana fahafaham-po sy ny zavatra miafina hahatonga azy ireo hihaino tsara. Mba ao anatin'ny minitra nomena, mahita vahaolana haingana ho amin'ny asa.
Mikarakara ny biby fiompy hametraka hatsaram-panahy sy mampianatra andraikitra. Misy ihany koa ny dikan-Tamagotchi virtoaly, izay afaka mitady dinosaurs, akoho ary na dia cosmic ankizy toy ny Pou.
manolotra fialan-tsasatra mahafinaritra foto-kevitra. Iza no tsy te-akanjo hazo Krismasy ao amin'ny fahavaratra, ary mitady fanomezana, miaraka amin'ny elves sy Dadabe Noely mba hanampy hiova ny mamy ny ankizy? Halloween dia mahaliana ho avy ny akanjo, nanapaka ny tarehiny eo amin'ny voatavo, mahandro sakafo nanana lohahevitra.
Sports lalao manolotra wheelbarrow hazakazaka, haiady amin'ny Tanora Mutant Sokatra Ninja sy Naruto, rivotra matoanteny amin'ny voalavo kely Mickey, Fanalana Bob sy basket ny baolina kitra sy ny loha.
Adventures amin'ny Dora sy Diego, alika fisafoana, Tom sy Jerry, Scooby Doo sy ny endri-tsoratra mahazatra tsy hisy farany.
Lalao ho an'ny ankizilahy sy ankizivavy
Fantaro ny zavatra ny mpandahateny mihevitra ny bitro sy ny saka Tom, nahita Paka atody, maka mandroboka ao anaty dobo ny kisoa Peppa manampy Masha voavaha ohatra, ary Little Red Riding Hood tsy ny volondavenona volchischem. Manana miandry lamaody lalao ho an'ny tovovavy sy tovolahy Shooting. Ianao no miandry ny tsara indrindra amin'ny vokatra lalao lohahevitra isan-karazany, satria samy manana ny fotoany mba ho mazoto sy manana fotoana mba hanorenana. Hahita sariitatra sy ny tantara an-tsary litera boky, izay nandao be dia be ny hevitra.
Ity fizarana ity dia azo oharina amin'ny casket ny zava-tsoa, ​​izay ny mifamatotra mamirapiratra sy tantara mampihomehy. Dia toa tsy misy ambany, toy ny zavatra vaovao tonga foana, ary mbola manana fahafahana hianatra zavatra mahaliana. Hiara-hitoetra eto miloko soavaly sy ny bibidia, ny mponina ao amin'ny tontolo anaty rano sy ny toerana, ary avy Lego ianao na inona na inona afaka hanangona avy amin'ny trano sy ny milina ny olona sy ny dragona.